Inkasta oo ay jiraan wax badan oo file video qaabab iPad Apple ay taageeri karaan, waxaa jira qaabab file ka sii tahay si aan la taageeri karo. Haddii aad weligaa isku dayay daawashada MTS, FLVs ama wmv gudbiyo aad iPad, aad laga yaabo in ay ka xun in la ogaado in ay ka Ma doonayo inaan u shaqeeyo.
Laakiin leedahay inaad ogaato in aysan macquul aheyn inay weli awoodo in uu ciyaaro video kasta oo aad rabto in aad daawato waxaa la. Marka aad ogaato file qaabab iPad taageeri karaan, kaliya si fudud aad u bedeli karaan faylasha aad u galay si ay u playable in qalab aad. IPad ayaa taageeri kartaa wax badan oo ka mid ah caadi ah qaabab video waxaan isticmaaleynaa maanta; waxaa ka mid ah H.264, MOV, M4V, MP4, M-jpeg, iyo MPEG-4. Videos ayaa ciyaaro app Videos ee iPad ee default.
Qaybta 1aad: Sida loo rogo ama MTS Files Isticmaalka Wondeshare Video Converter Ultimate for Mac
Qeybta 2: Sidee si ay u gudbiyaan badaley Videos in iPad
Haddii aad qabto file MTS ah in aad rabto in aad daawato aad iPad, ikhtiyaarka aad leedahay waa in loogu badalo aad file galay wax waa la jaan qaada iPad, iyo in aad hanuuniyo diinta aad file, halkan waa talaabada ay tacliin talaabo sida loo waxaa samayn isticmaalaya Wondeshare Video Converter Ultimate for Mac .
Tallaabada 1 Ku rakib Barnaamijka
Download Wondeshare Video Converter Ultimate for Mac ka hoos ku qoran oo ku xidh.
Ka dib markii ay si guul leh u soo degsado iyo ku rakibidda barnaamijka si aad Mac, abuurtaan barnaamijka iyo in la furi doono muujinaya tab loogu badalo ka. Oo halkaasaannu ka riix "+" ay helaan ee qaybta hoose ee bidixda ee suuqa oo ay helaan folder meesha file aad rabto in aad ka soo dejisan waxaa la badbaadiyey, ama haddii aad rabto in aad si loogu badalo file ka CD ama DVD, ka dibna dooro "DVD files Load ... "doorasho. Laakiin haddii aad rabto in aad kale oo u fududahay in ay dajiyaan aad file, aad si fudud u soo jiidi kartaa jeedi faylka barnaamijka.
Laga soo bilaabo qaab MTS, aad rabto in aad si loogu badalo aad file in wax waa playable ee iPad, si ay u doortaan qaab wax soo saarka aad file ah, guji sanduuqa kor iyo hoos arrow ka ikhtiyaar wax soo saarka. Options muuqan doono oo halkaas ka dooran kartaa midka aad jeceshahay, sidoo kale waxaad dooran kartaa H.264, MOV, M4V, MP4, M-jpeg, ama MPEG-4 sidii qaab wax soo saarka aad.
Ka dib markii doorashada iyo in aad diyaar u tahay in loogu badalo faylka tahay, guji icon ee ka qayb-midigta hoose ee suuqa iyo diinta video ka bilaabi doonaan. Waxaad awoodaa inaad yara ama joojin beddelaad markasta oo aad rabto. Iyo in ay la socdaan xaalada aad diinta, waxaa jira bar horumarka iyo sidoo a.
Hadda oo aad leedahay aad files MTS badaley, wax soo socda inaad sameyso waa in file video ku wareejiyo si aad iPad, inaad tan sameyso, raac edbinta hoos.
Tallaabada 1 Connect iPad si aad u computer iyo Lugood Open
Connect aad iPad la cable USB, marka aad Mac ogaado qalabka, Lugood toos ah lagu daahfuri doonaa, haddii ay dhacdo in aysan laftiisa abuurtaan, oo aad gacanta ka furan kartaa Lugood aad.
Tallaabada 2 Import Video inay Lugood
Hel aad video il folder furan. Tag Lugood oo taga si qaybta Movies, ka folder isha, faylka ama faylasha jiidi markaas hoos guddiga Lugood iyo sugto Lugood ay u encode video ah.
Tallaabada 3 Dooro Video si ay u hagaagsan
Riix magaca qalab ee ka dibna tag filimada calaamadda in aad qalab menu iPad. Dooro "Movies nidaameed". Waxaad heli doontaa doorasho ah haddii aad rabto in aad u hagaagsan oo dhan filimada ka Lugood ama aad rabto in aad kaliya ku wareejin filimka aad kaliya ayaa ku badaley.
Tallaabada 4 nidaameed Movie ah
Riix badhanka nidaameed iyo sug in lagu bar slide ah si ay u gaaraan dhammaadka. Ku raaxayso daawashada aad video aad iPad!
Wondeshare Video Converter Ultimate for Mac xamili karaan nooc kasta oo diinta in aad leedahay in la sameeyo, haddii aad u baahan tahay si loogu badalo MTS lagu file MOV ah ama video ah oo waa la jaan qaada qalabka mobile. Wondeshare Video Converter Ultimate for Mac sidoo kale ku siinaysaa awood u leh inuu tayadoodii filesfor qaybsiga aad on websites video-qaybsiga sida Facebook, YouTube, iyo vimeo. Taas ayaa ka dhigaysa software taagan dhexdooda kale software video Converter baxay.
> Resource > iPad > Sida loo Play MTS Faylal ay ku iPad